Home Somali News Somaliland: “Mucaaridka Waxaan Leeyahay Idinkaa Dadka Iska Eryayee Hadhow Ha Odhanina Waa...
Xaaji Cabdikariim Xuseen Yuusuf (Xaaji (Cabdi Waraabe) ayaa sheegay tallaabooyinka ay mucaaridku ku kacayaan in ay yihiin qaar ay ku taageero waayaayaan, waxaanu intaa ku daray in markay hadhow dhacaan aanay qaadan waa ku noqon oo aanay ku war-wareegin waa nalagaga shubtay.
Waxaa kale oo uu Xukuumadda kula dardaarmay in ay u dul qaadato qadafyada iyo meel ka dhacyada kaga yimaadda Mucaaridka oo uu sheegay in ay socod barad ku yihiin mucaaridnimada isla markaana aanay wali u bislaan.
Waxaa kale oo uu intaa Xaaji Cabdirakiin Xuseen raaciyay in Madaxweynuhu si wanaagsan u shaqaynayo isla markaana uu dalka meel kasta soo maray wax qabadyo muuqda uu hir galiyay intii uu Xukumka hayay.
Xaajigu waxa uu sidoo kale ka hadlay dhibaatooyinka ka soo gaadhay Guurti ahaan sidii ay u dhammayn lahaayeen khilaafyadii Golaha Wakiilada ee ka taagnaa Kursiga Cabdiraxmaan Cirro. Waxaanu sidaa ku sheegay waraysi gaar ah oo uu shalay siiyay wargeyska DAWAN.
“Meel wanaagsan ayaynu maraynaa oo dawladnimadeennu meel wanaagsan ayay joogtaa, si wanaagsan ayuu u shaqaynayaa madaxweynaha magaciisu ha raagee sida u shaqaynaayo ee uu u wareegaayo waad aragtaan madaxweynaha iyo xukuumadiisa waxaan leeyahay sida aad wax u wadaan inaad kordhisaan maahee ha dhimina,”ayuu yidhi Xaaji Cabdi Xuseen Yuusuf.
Xaaji Cabdi-waraabe waxa uu xukuumadda Ugu baaqay qoddobo u baahan in wax laga qabto, waxaanu yidhi “Waxaanad ku dedaashan oo aad xooga saartaan qoddobo innaga dhiman oo waaweyn, Hargeysa oo ah caasimadii dalka way biyo la’dahay inyar baa hesha biyaha ,sibidhkii oo buuraheenna buuxa ayuu Sibdh iib ah la innooga keenaa Itoobiya, waxaan jecelahay inaad ku dedaashaan sidaad mashaariicda kale ee horumarka ah ee waddooyinku ka mid yihiin aad ugu guntateen labadaas mashruuc ee waxtarka lehna ugu dedaala.”
Xildhibaan Cabdi-waraabe waxa uu su’aal sharci waydiiyay Guddoomiye Cabdiraxmaan Cirro, waxaanu yidhi “Cabdiraxmaan Cirro kolka isaga loo kordhiyana ma xalaal baa, marka Madaxweynaha loo kordhiyana ma xaaran baa, Guurtidu labada jeer iyamay khaldan tahay. Cirrooy wixii dhibaato naga gaadhay kursigaaga waad ogayd,qadafku waa imanayaa mucaaridna qalooc waa ka soo baxayaa. Waa inaan u dulqaadanaa oo aan la xaalaynin.”
“Mucaaridka waxaan leeyahay idinkaa dadweynaha iska eryaaye hadhow ha odhanina waa lagu shubtay marka la idinka helo, waayo kolkaad Guurtida wax ka sheegtaan oo dawladda wax qadaf ah ka sheegtaan soo dadweynuhu idinka yaaci maayo,”ayuu ku dooday Xaajigu, waxaanu intaas ku kabay. “Shicibka waxaan leeyahay halkaad maanta maraysaan waad arkaysaan. iskuuladii,waddooyinkii,shaqadu sida ay u socoto lacag kordhintii ciidamadii sida loo hagaajiyay dhan walba waad arkaysaan. nimaan idin hor-galaynin oo aan xidhaynin, oo xabadu ku dhacaynin oo aan dantiisa seegaynin oo xaga dambe istaagayaa, yaanu daasad idiin tumin iska ogaada buuqa,waa shicibka cidda hurdada laga kicinayaa shicibku waa inuu feejignaadaa.”
Ugu dambayn waxaa uu ka hadlay muddo kordhinta Golaha Guurtidu u sameeyay xukuumadda iyo Golaha Wakiiladda. “Muddo kordhintu waa ay dhacday waana ay dhammaatay sheekadeedii oo go’aan Gole sharci u lahaa ansixiyay ayay ahayd. mucaaridkuna hadal waayi maayo laakiin dantiisa ha garto ,oo habka wax loo mucaarido ha barto, ee uu dad ku helaayo iyagaaba waanu u kordhinay mucaaridka waanu u kordhinay lamana ceebsan iyaguna muddo kordhintan yaanay cambaareyn,”ayuu hadalkiisii ku soo khatimay Xaaji Cabdi-waraabe.